Haweenay Soomaali ah oo wali weerar ku haysa diinta Islaamka - iftineducation.com
iftineducation.com – Haweenayda lagu magacaabo Mona Walter oo Soomaali ah taasoo aan dhowr jeer wax ka qornay wareerada iyo aflagaadada ay ku hayso diinta Islaamka iyo rasuulka (scw) ayaa wali ka dhex muuqata saxaafada Sweden, iyagoo mowduuceedii ugu dambeeyay ku qortay wargeyska Nyheter24 kaasoo ay kaga hadashay sida ay Swedishku uga cabsanayaan in ay cambareeyaan diinta Islaamka.
Haweenaydaan oo muddo hore ka baxday diinta Islaamka isla markaana qaadatay tan Kiristaanka ka dib markii ay guursatay nin Swedish ah ayaa shaqo ka dhigatay in ay been abuur iyo weeraro joogto ah ku qaado diinta Islaamka iyo Muslimiinta, iyadoo Islaamka ku tilmaamtay mid aan nabad ahayn oo dhibaato ku haya dadka aan Muslimiintu ahayn. Muslimiinta ayay ku tilmaamtay kuwo been ka sheegaya diinta Islaamka oo aan soo bandhigayn wajiga dhabta ah ee diintooda. Quraanka ayay dhowr aayadood ka soo qaadatay oo ay ku tilmaamtay in ay yihiin kuwo faraya in la dilo dadka ka soo horjeesta Islaamka.
Haweeneydaan ayaa u muuqata mid ka mid ah dadka wax kasta u samaynaya si ay u fuulaan masraxa saxaafada oo ay u helaan magac, iyadoo halkii ay ku mashquuli lahayd diinta cusub ee ay qaadatay, ku mashquulsan cambaareynta iyo weerarka ay ku hayso Muslimiinta iyo Islaamka. Aqoonteeda diimeed ayaa u muuqata mid aad u kooban, iyadoo soo koobiyaysay hadalada ay inta badan isticmaalaan cunsuriyiiinta waaweyn ee Islaamka neceb. Waxay u muuqataa mid doonaysa in ay u soo caanbaxdo sidii Ayaan Hersi Ali iyo raggii la midka ahaa.
Haweeneydaan ayaa sida ay magaca u raadinayso waxay xitaa ku biirtay xisbiga cunsuriga ah ee SD taasoo noqotay Soomaaligii ugu horeeyay ee xubin ka noqda xisbigaas.
Muslimiinta Sweden iyo daafaha aduunka ayaa waxaa la gudboon in aysan wax waqti iyo qiimeyn ah siin hadalada macno darada ah ee ay ku doonayso in ay ku hesho magac. In loo jeediyo hanjabaado iwm ah ayaa noqonaya mid ay ka dhigato shidaal ay ku soo caan baxdo.
Daawo: Wade Taksi oo xaqii uu lahaa loogu badalay dhacdo wejigiisa ka muuqata..